AirPods waxay lahaan karaan maqal lumis ah oo cusbooneysiin ah sida uu qabo Prosser | Waxaan ka socdaa mac
Dhowr maalmood ka hor, Apple ayaa ku dhawaaqay shaqeynta cusub ee Apple Music. Maqal lumis iyo kordhinta tayada Hi-Fi. Taasi waxay ka dhigeysaa inay ku socoto suuqa iyadoo waxyar ka faa’iideysaneysa tartamayaasha. Si kastaba ha noqotee, wixii u muuqday sida warka wanaagsan wuxuu isu beddelay bambo maxaa yeelay AirPods kama faa'iideysan karaan qaar ka mid ah astaamahan waxayna u baahan doonaan fiilooyin si ay sidaas u sameeyaan. Wax aan caqli gal ahayn. Si kastaba ha noqotee wararka xanta ah ee cusub ayaa ah inay macquul ku noqon doonto cusbooneysiin.
Rajo ayaa laga qabaa dadka isticmaala AirPods ee dhibsaday in Apple Music ikhtiyaarkeeda maqalka ah ee bilaa khasaaraha ah uusan ka shaqeyn doonin dhegaha kumbuyuutarkooda wireless. Falanqeeyaha ku takhasusay Apple, Jon Prosser wuxuu sheegay in Apple ay soo bandhigi doonto cusbooneysiin softiweer u oggolaan doona dhagaha sameecadaha inay soo saaraan inay gaaraan shaqeyntaas.
Prosser wuxuu sheegay in xaddidaadda ay sabab u tahay Bluetooth. Iyo xaddidaaddaas ayaa ku dhow in laga saaro. "Waxaa la ii sheegay in cusbooneysiin fudud markasta, Apple ay ka shaqeyneyso inay u oggolaato AirPods inay ka shaqeyso AirPlay," ayuu yiri falanqeeyaha. Iyadoo la adeegsanayo AirPlay, qalabkaagu wuxuu isticmaali lahaa Bluetooth si uu u ogaado AirPods ahaan qalab ahaan, laakiin markii aad ku xidho, wuxuu abuuri lahaa xiriir Wi-Fi shaqsiyeed si loo sii daayo codka u dhexeeya qalabka. Iyo, kor u kaca, sida oo kale, AirPods waa dhagaha dhagaha ugu horreeya ee wireless si ay u gudbiyaan maqal la'aan.
Wada-shaqeeyaha Prosser Ma sheegin noocyada AirPods ee taageeri doona AirPlay cusbooneysiinta ka dib. Midkoodna taariikh suuragal ah in la sii daayo ma ahan. Laakiin Apple waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto ikhtiyaarka aan qasaaraha lahayn ee Apple Music laga bilaabo Juun 2021. Markaa wakhti kasta wixii ka dambeeya taariikhdan.
Waan arki doonaa haddii waxa uu sheegayo ay run noqon karaan. Sababtoo ah waa inaan maskaxda ku haynaa taas Wi-Fi wuxuu cunaa batteri aad u badan, taasoo yareyn karta waqtiga udhaxeeya ujrada ilaa qadar aan caadi aheyn oo gaagaaban. Taas oo soo gaabin doonta muddada isticmaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods waxay lahaan karaan maqal lumis ah oo cusbooneysiin ah sida uu qabo Prosser
Apple wuxuu ku dhawaaqay muuqaalada marin u helka cusub ee barnaamijyada kaladuwan.